स्तनपान गराउने आमाको सङ्ख्या घट्यो - Naya Aawaj
बट्टाको दूध खाएका बालबालिकाको मृत्यु दर १० गुणा बढी
काठमाडौं, फागुन १४, २०७७
पछिल्लो समय नेपालमा स्तनपान गराउने आमाको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गएको छ । आमाहरूले आफ्ना बच्चालाई किन स्तनपान कम गराउन थाले ? स्तनपान नगराउँदा बच्चा र आमाको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्छ ? के बजारमा सहज रूपमा उपलब्ध फर्मुला मिल्कले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ ? बजारको दूधले बच्चाको शरीरिक मानसिक वृद्धि विकासमा कस्तो असर पु-याउँछ ? फर्मुला मिल्क र स्तनपान गर्ने बच्चाबीच शारीरिक तथा मानसिक विकासमा केकस्ता भिन्नता देखिन्छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गत पोषण शाखाका प्रमुख केदारराज पराजुलीसँग माया श्रेष्ठले गरेको कुराकानी :
नेपालमा स्तनपान गराउने आमाको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गएको हो ?
बिगौते दूध पहिलो महत्त्वपूर्ण खोप हो भन्नुभयो तर आमाको पहिलो बिगौते दूध खुवाउन हुँदैन भन्ने समुदायमा अन्धविश्वास पनि छ नि ?
शारीरिक र मानसिक रूपमा बच्चाको विकास हुन आमाको दुध अति आवश्यक पर्छ भन्नुभयो, आमाहरूले पनि खानपान कस्तो हुनुपर्छ ?
बच्चा ६ महिना पुगेपछि आमाको दूधसँगै कसरी खाना खुवाउन पर्छ ?
त्यसो भए बजारमा सहज रूपमा उपलब्ध हुने फर्मुला मिल्क आवश्यकता हो वा बाध्यता हो ?
फर्मुला मिल्कले बच्चाको शारीरिक र मानसिक विकास गर्दैन वा हानि गर्छ भने राज्यले किन प्रतिस्थापन नगरेको होला ?
बच्चालाई स्तनपन गराउँदा आमाको स्वास्थ्यमा असर वा आमाको स्तनको आकार प्रकार केही बिग्रिने हुन्छ कि हुँदैन ?
बच्चालाई दूधमा चुसाउने आमाको स्वास्थ्य बजारको दूध मात्र खुवाउने आमाको स्वास्थ्यभन्दा राम्रो हुन्छ । आमाको दूध चाहिँ परिवार योजना कुरा प्रयोग गर्छौं । त्यसले फाइदा गर्छ भनेर कुरा गर्छौं । तर आमाको दूध जब बच्चाले चुस्छ त्यसबेला आमा र बच्चाबीच माया, प्रेम, स्नेह झन् बढेर जान्छ । त्यसले जीवनलाई नयाँ गति दिन सहयोग पु-याउँछ । आमालाई हुने स्तन क्यान्सरको सम्भावना पनि कम हुन्छ । यो रोग दूध चुसाउने आमामा भन्दा नचुसाउनेमा धेरै गुण बढी पाइएको छ । स्तनपान गराउँदा आमाको स्तनको आकार विग्रिन्छ भन्ने धारणा विलकुल गतल हो । स्तनपान गराउँदा कुनै आमाको आकार प्रकारमा परिर्वतन ल्याउँदैन । दूध चुसाउन छाडेपछि क्रमशः स्तनको आकार पहिलाकै लयमा विस्तारै देखिन्छ । त्यसपछि स्तन पहिलेकै प्राकृतिक आकारमा आउँछ । दूध नचुसाउने आमाको दूध गानिने, पाक्ने, बाहिर ननिस्कन समस्या भएपछि डल्लो भएर बस्छ । गिर्खा बन्दै गयो भने त्यसैले स्तन क्यान्सरको रूप लिन सक्छ ।
अप्रेसनपछि केही दिन आमामा समस्या हुने हुँदा आमाले २, ३ दिनपछि बच्चाले दूध चुसेन भनेर बट्टाको दूध ख्वाएको देखिन्छ । यसले पनि बट्टाको दूधमा पहुँच बढेको भन्न सकिन्छ ?